Dooda xeer hoosaadka Baarlamaanka DFS oo Xildhibaanadu ay maanta kulan ku yeelana doonaan. – Madal Furan
Hoy > Warka > Dooda xeer hoosaadka Baarlamaanka DFS oo Xildhibaanadu ay maanta kulan ku yeelana doonaan.
Dooda xeer hoosaadka Baarlamaanka DFS oo Xildhibaanadu ay maanta kulan ku yeelana doonaan.
Editor October 3, 2018 Warka 0
Muqdisho (Madal Furan) – Waxaa maanta magaaladda Muqdisho kulan isugu imaan doona Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka ee DFS oo la filayo inay dood ka yeelan doonaan Xeer Hoosaadka Golahu uu ku dhaqmo.
Guddoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa oo shirgudoomiye ka noqon doona kulankan ayaa Xildhibaanada u qeexi doona hanaanka dooda wax looga bedelayo Xeer Hoosaadka Golaha Baarlamaanka DFS.
Waxaa aad loo adkeeyey amaanka wadooyinka gala xarunta Baarlamaanka iyadoo jidadka lagu arkayey Ciidamada booliska oo baaritaano ku haya gaadiidka iyo shacabka isticmaala wadooyinkaas.
Weli waxaa jira dood aad u adag oo Goluhu ay falanqeynayaan inay suurtagal tahay in wax laga bedelo Xeer Hoosaadka Golaha iyadoo aan si dhab ah loo ogeyn inuu in Xildhibaanadu isku raaci doonaan iyo inay ka horimaan doonaan wax ka bedelka Xeer Hoosaadka Baarlamaanka.
Sawirrada booqashada Madaxweynaha Eritrea oo Muqdisho gaaray
Muran dhex maray madaxda Amniga Puntlnad iyoTaliyaha Booliska Puntland oo dhaawacay ku xigeenkiisa